ManarakaMapa | Fijoroana ho vavolombelona NextMapping ™
Hevitry ny mpanotrona Rave ho an'ny Keynote Virtual an'ny Cheryl avy amin'ny hetsika Enbridge Gas Leadership Development:
“Misaotra ny ekipa nikarakara ity hetsika ity. Tena nahasarika ilay mpandahateny ary nanome torohevitra tsara azo ampiharina. ”
"Hitako fa mazoto ilay mpandahateny ary nanome sosokevitra tena mifandraika amin'ny orinasanay izy."
"Cheryl dia tokony ho namandrika nandritra ny fotoana ela kokoa!"
"Cheryl ny lahateninao ho an'ny teny virtoaly dia ampahany lehibe tamin'ny fihaonambenay - misaotra anao noho ny fiahianao, ny fanaingoanao ary ny teny fototra nentanim-panahy."
Planner amin'ny hetsika - ServiceNow
Ny fijerena an'i Rave ho an'ny Virtual Keynote Cheryl avy amin'ny EBAA 2020 Online Conference Attendees:
"Fampisehoana tena tsara ity ary tsy tokony ho tsara noho ny fanamby iainantsika rehetra izao ny fotoana."
“Tena tiako ilay rindrambaiko nampiasain'ny mpandahateny fanalahidy - angamba ny traikefa virtoaly tsara indrindra hitako (sy akaiky ny zavatra niainako manokana). Ny famerenana ny endriny araka ny tokony ho izy teo amin'ilay slide-ny. ”
“Tiako ny fampiasan'i Cheryl ny lampihazo izay nanamora ny fanarahana ny famelabelarany sy ny fanapotehana ny monotony.”
"Ny hevitr'i Cheryl momba ny fikatsahana hahafantatra sy hitadiavana marimaritra iraisana amin'ireo anton-javatra izay manohitra antsika, fa tsy ny famerenam-bidy sy ny fiezahana hiady amin'ireo lafin-javatra ireo, dia tena sarobidy sy ara-potoana ho an'ny indostrianay."
“Ny fivoriana niarahana tamin'i Cheryl dia nafana sy nandrisika. Ny fisainana sy fahiratan-tsaina vaovao ho an'ny mpitarika dia hanampy ny fikambanana, raha tsy mbola mampiasa ny maodely izy ireo, ho lasa mahomby kokoa amin'ny fananganana ekipa. ”
“Mahatsiaro ho velombelona aho ary hifantoka bebe kokoa amin'ny ho avy noho ny tamin'ny fotoana kelikely!”
“Hevitra tsara momba ny fitarihana tsara.”
“Nahaliana tokoa ny famelabelaran'i Cheryl, ary nianatra toro-hevitra vitsivitsy azoko ampiasaina any am-piasana aho.”
“Mpiresaka mahay indrindra - nahatsapa ho nifandray tamin'ny fiarahamonina aho taorian'ity fivoriana ity.”
“Misaotra, Cheryl, naneho / naneho ny fomba fijerinao - fampisehoana mahafinaritra!”
“Ry Cheryl tiako!”
“Noheveriko fa ny NextMapping dia tena tsara ary tena ara-potoana. "
“Fotoana mifanentana amin'ity lohahevitra ity!”
“Tiako ny maha lohany miresaka azy eo amin'ny farany ambany amin'ny slide-ny. Ny vokany dia tsy nanala ilay fampisehoana an-tsary vokatr'izany. ”
“Tena tsara i Cheryl!”
“Tiako ity. Ilaina ny fanamafisana ny fiaraha-miory. ”
"Ny biraom-pifandraisana dia fanampin-javatra mahafinaritra tamin'ny fampisehoana."
"Ny mpandahateny fototra dia tena nahalala ary hanome sosokevitra ny amin'ny ho avy."
“Mahafinaritra izany! Ny fandaharam-potoana virtoaly dia mifototra sy mahasarika ary nitazona ny mpanatrika manerana ny tany. Hita teo. ”
Fihaonamben'ny Fihaonambe - EBAA
“Eny, afaka milaza marina isika fa ny tenin'i Cheryl no manana ny fihaonambe be indrindra indrindra mandritra ny 50 taona nahitana ny hetsika.
Miaraka amin'ny famoahana ny fanontaniana sy ny mpanatrika ny fandatsaham-bato, dia nahatsapa ho mpandray anjara amin'ny resaka ny mpihaino - fa tsy hira mora!
Ny fomba fanalahidy nataon'i Cheryl dia mamorona ary manome modely izay resahiny amin'ny hoe "leadership". "
Tale - NWLS
"Tsara. Misaotra anao! Ary misaotra indray tamin'ny famelabelaran-kevitra, podcast ary fotoam-pivoriana mahafinaritra. Nahazo fanehoan-kevitra tsara amin'ny taonina aho. Mamerina ny fisaorana anao!"
H. Wetzel, Sr. Director Marketing sy Fifandraisana amin'ny mpikambana - NRECA
Famerenam-bava amin'ny Rave avy amin'ny BMO Future of Work Event Attendees:
“Fotoam-pianarana sy fieritreretana mampihetsi-po amin'ity maraina ity momba ny ho avin'ny asa - Misaotra.”
"Cheryl faly be fa afaka nitondra anao ho any amin'ny mpanjifanay manerana an'i Kanada izahay, ny fikarohana sy ny fahitana anao mialoha dia eo amin'izay efa andehanan'izao tontolo izao! Tsy izany ihany, fa mahafinaritra anao tokoa ny miara-miasa. Fahafinaretana izany. ”
"BMO dia nampiantrano seminera" Future of Work - How to be a Future Ready Leader "seminera tamin'ity herinandro ity avy amin'i Cheryl Cran. Ao anatin'ny tontolon'ny mandeha ho azy sy ny fanaovana nomerika, ilaina ny mahatakatra fa ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia manatsara ny vintana ary hahitana valiny fa tsy mampihena asa. Ny momba ny fahafahan'ny ekipa mahomby kokoa ary mifantoka amin'ny filan'ny orinasa fototra. Nisy mpanjifa nilaza tamiko fa te hanao banky kely sy orinasa maro kokoa izy - izany no dingana iray hiomanana amin'ny ho avy. ”
“Misaotra, Cheryl, tamin'ny atrikasa nieritreritra be. Nahatonga taratra taratry ny kalitao be dia be avy amin'ny client sy ny staff anay nanatrika androany ianao. Misaotra anao ihany koa tamin'ny sidebar re mahaliana: ny fifandraisana misy eo amin'ny automation sy UBI — resaka mahafinaritra! ”
“Atrikasa tsara momba ny fikambanana vonona amin'ny ho avy sy ny mpitarika vonona ho avy! Andao hiara-manova ny fisainana "izaho" ho lasa "we"! Faly be aho noho ny fahalalana nozarainao nandritra ny atrikasa. Tsy andriko ny hamaky ny bokinao! ”
“Maraina manentana sy manintona miaraka amin'ny mpanjifa BMO Financial Group Kanadianina Banky ara-barotra sy Cheryl Cran. Ny teknolojia any am-piasana dia tsy maintsy ampiasaina hiomanana amin'ny ho avy miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fomba ahafahan'ny teknolojia manatsara ny vokatra ho an'ny olona. Izany dia fanandramana nanokatra maso hianarako ny fomba ahafahanao mandray andraikitra haingana mba hampitomboana ny fividianana ekipa, ny fahafaha-manao ary ny fanatanterahana. ”
"Cheryl your keynote on," Change Leadership & The Future of Work, "dia tonga lafatra ho an'ny vondrona mpitarika sy ho an'ireo mpiara-miasa rehetra manerantany.
Ny ekipanay dia faly fa nanana anao tany amin'ny talen'ny Las Vegas ary nahazo valiny tsara avy amin'ny olona rehetra eny an-toerana sy avy amin'ny mpandray anjara mivantana.
Nahita adihevitra be dia be momba ny Twitter ny sasany amin'ireo paikadinao momba ny fanovana ny fitantanana sy ny ho avy toy ny 'mpianatra' ary manapotika ny silos.
Maniry daholo ny hanana fotoana betsaka kokoa aminao izahay!
Andao hifandray hatrany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy - misaotra indray. ”
Global Senior Manager, kalitao - Aristocrat Technologies
Fanamarihana Rave 'text' avy amin'ireo mpanatrika ASQ Conference:
“Ity no fampisehoana tsara indrindra sy tsara indrindra amin'ny kaonferansa iray manontolo.”
“Ity dia fomba tsara iray hampirisihana ny fandraisana anjara sy fanampiana ny olona te hihaino anao tokoa. Misaotra nizara an'ity teknika vaovao ity sy atiny tena tsara. "
“Mahagaga ahy ny tanjakao sy ny hatsaranao. Tiako ny mifandray sy mahazo ny torohevitrao. ”
“Mahatalanjona, mahatadidy, mahavelona, ​​mampieritreritra - misaotra”
"Misaotra anao! Hanao aho. Fampisehoana mahafinaritra androany. Notohizanao io !! Ho faly aho hamaky ny bokinao. ”
“Tena mankasitraka ny fahavononanao hizara ny fampisehoana nataonao sy ireo loharano hafa. Mampiseho ny fahatokisanao izany ary tsy miahiahy momba ny famoronana orinasa consultant fotsiny ianao. ”
“Masina! @ $ & Fampisehoana miavaka! Misaotra anao."
“TIA ny fifandraisana sy ny atiny mahavelombelona”
“Tsara be ianao!”
"Ry vehivavy tsara - Misaotra anao nanantitrantitra indray ny" lalàn'ny fiainana ny fanovana "
“Manentana ny fanahiko ianao, Cheryl!
“Tena nanome aingam-panahy ahy ianao!”
"Lehibe! Niresaka bebe kokoa momba izany koa ianao nandritra ny fampisehoana nataonao. Misaotra betsaka tamin'ny fandrehitra anay androany. Nohavaozina aho. ”
“Misaotra, tena mavitrika sy manome aingam-panahy ianao.”
“Fotoam-pivoriana lehibe. Misaotra fa manome aingam-panahy sy azo ampiharina! Mahafinaritra."
“Tiako io. Ny fisongadinan'ny kaonferansa tokoa. Misaotra anao!"
“Kabary fototra lehibe !!! Psyched aho! Fandanjana vazivazy, fahendrena, firosoana ary aingam-panahy toy ny mahazatra. Ny tsara indrindra hatreto! ”
“Famelabelarana mahatalanjona dia mifindra ny fihetsikao manatsara ny ho avy. Misaotra anao nanome aingam-panahy anay. ”
“Ny fivoriana tsara indrindra hatreto! Energie sy manome aingam-panahy ”
"Cheryl no mpandahateny voalohany ho an'ny Fihaonambenay ho an'ny fahaiza-manao tsy mitohy Innovation any Toronto.
Tamin'ny resakay voalohany dia miharihary fa tena nahalala zavatra i Cheryl tamin'ny ho avin'ny asa ary nandany fotoana hahatakarana ny tanjon'ny fikambananay sy ny hetsika nataonay. Ny fampisehoana nataony dia nahasarika sy nahalalàm-baovao ary nanangana ny andro sisa velona tamin'ny fomba tonga lafatra. Manana mpihaino isan-karazany izahay izay misy ny mpianatra ambaratonga faharoa, mpanabe, manam-pahaizana momba ny indostria ary tompon'andraikitra amin'ny governemanta. Samy naka zavatra tamin'ny lahatenin'i Cheryl ny tsirairay ary naneho hevitra momba ny herin'ny fampisehoana tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo. Miarahaba anao hiara-hiasa amin'i Cheryl indray aho amin'ny ho avy. ”
Namir Anani - Filohan'ny Tale sy Tale Jeneralin'ny ICTC
“Tena nankafiziko ny lahateninao. Voasarika avy hatrany aho ary tiako ilay fifandraisana. Ny lehibe indrindra, ny fitiavanao ny ho avy amin'ny asa sy ny orinasa no nahatonga ny famelabelaranao ho tsy hadino kokoa. Azafady mba ampahafantaro ahy ny momba ny hetsika sy ny tetikasa ho avy izay andraisanao anjara. Tiako ny maheno anao miresaka bebe kokoa momba ny fanavaozana sy ny haitao.
Tena nahafinaritra ny nandre anao niteny. Manantena aho fa hihaona isika, ato ho ato. ”
Vahiny faha-9 - Fihaonana an-tampon'ny fanavaozana ny ICTC
"Cheryl no mpandahateny voalohany ho an'ny fiofanana nasionaly nasionaly AGA isan-taona ary nahagaga izy!
Ny lohateny lehibe dia mitondra ny lohateny hoe: "The Art of Change Leadership - How to Flex in Flux" ary ny hafany dia tena ara-potoana ary misy lanja lehibe ho an'ireo mpandray anjara taminay. Nahazo valiny tsara dia tsara avy amin'ny vondrona misy anay momba ny fomba fampandehanana mavitrika an'i Cheryl, ny fandatsaham-bato ary ny fifandraisan'ny Q&A, ary ny fanadihadiana nalefany tamin'ireo mpandray anjara mba hahafantarana ny mpihaino azy sy hanamboarany ny fampisehoana nataony. Ny hevi-dehibe fanokafana an'i Cheryl dia nanomboka ny kaonferansa tamina angovo lehibe - tianay ireo horonan-tsary sy ny mozika izay nahaliana ny olona rehetra nandritra ny tontolo andro. ”
J. Bruce Talen'ny Fihaonana
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny hetsika fanaonay isan-taona ary tamin'ny teny iray dia niavaka izy. Ny fomba fijery tokana an'i Cheryl momba ny hoavin'ny asa sy ny zavatra ilain'ny orinasa eo am-piandohana dia nitondra sanda lehibe ho an'ny vondrona misy anay. Nandany fotoana tamin'ny fakana hevitra tamin'ny tenako sy ny ekipan'ny mpitarika momba ny kolontsainay manokana sy ny fomba hampiasana ny zavatra efa nataonay tsara. Ny mpitarika anay dia nanolotra ankihiben-tànana roa ho an'ny fomba fanateran'i Cheryl izay haingana be, mivantana ary mavitrika. Ho fanampin'izay, tena nankafizin'ireo mpitarika ny nanatevin-daharana anay Cheryl tamin'ny fiarahamiasa hariva. Ny hitako tena sarobidy tamin'ny naha Tale jeneralin'ny orinasa azy dia ny fanadihadiana alohan'ny hetsika izay nampidiriny tao amin'ny lohan-keviny ary koa ny fandatsaham-bato sy ny fandefasana hafatra tamin'ny fotoana tena nahatafiditra ny vondron'ireo mpitarika manavaka. Tsy niresaka momba ny ho avy sy ny fironana fotsiny i Cheryl fa nomeny fitaovana fitantanana fanovana mba hamoronana ambaratonga fahombiazana manaraka. ”
“Tsy afaka misaotra an'i Cheryl ampy ahy aho noho ny teny ifotony manome aingam-panahy sy mahaliana momba ny Fanintonana ireo mpanao fanovana amin'ny fihaonambem-panjakan'ny Public Public JLT Canada 2018. Ny fotoam-pivoriany dia nanakoako tsara niaraka tamin'ny mpihaino monisipaly anay, saingy nandritra ny arivo taona nikendry ny hanao mpanova indray andro any Ny fotoam-pivorian'i Cheryl dia tonga teto amiko manokana. Ary tsy afaka nijanona tsy niresaka momba ireo singa mifandraika amin'ny fampisehoana nataony ireo solontena solontena - tena nandaitra ary fomba iray hampifandraisana ny rehetra, ara-bakiteny! ”
P. Yung Marketing sy serasera, Jardine Lloyd Thompson Canada Inc.
"Cheryl no mpitondra teny fanamafisam-peo ho an'ny fihaonambe TLMI fanao isan-taona. Tena nokapohina mafy tamin'ny vondrona nisy anay izy - ny teny ifotony nomeny dia nanome ny heviny ary ny fikarohana momba ny hoavin'ny asa dia mifandraika amin'ity vondrona avo lenta ity. Tianay ny fomba nanampian'i Cheryl fikasihana manokana toy ny sary tamin'ny hetsika fandraisam-bahiny nataonay ny hariva teo ary nanondro ny fahombiazan'ny mpikambana iray izahay ary nanome fomba fijery stratejika ihany koa. Ny fifandraisana amin'ny fandefasana hafatra sy ny fandatsaham-bato dia tokana ary nanampy ambaratonga fanampiny amin'ny fampidirana tsara ny mpijery. Tianay ny niara-niasa tamin'i Cheryl ary tianay koa ny vondrona misy anay. ”
D.Muenzer Président, TLMI
"Cheryl Cran no talen'ny fanokafan-tenantsika tamin'ny 2018 CSU Management Management Conference ary tena nahafinaritra izy! Ny hafany momba ny fanovana, ny herimpo ary ny fiaraha-miasa dia tena tokony ho maheno ny tarika misy anay. Tsy tokony hatahotra ny hoavy rehefa mahatsapa ianao fa izy no mpanao maritrano. Nizara fitaovana azo ampiasaina izy izay azontsika rehetra averina sy ampiharina avy hatrany raha mitombo ny fahombiazan'ny ekipa. Tena nankasitraka ny fampiasana an'i Cheryl tamin'ny mpihaino sy ny fitsapan-kevitra ary ny firotsahan'ny vondrona dia niasa tamin'izy ireo tamin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Tiako ny fomba namalian'i Cheryl an-tsitrapo ireo fanontaniana an-tsoratra rehetra ary anisan'izany ireo fanamby. Ny fanontaniana an-tsoratra dia nandrisika ny fanehoana ampahibemaso momba ny fo. Mpanatrika maro no nitatitra tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy ny Twitter fa ny lakilam-panokafana mavitrika nataon'i Cheryl dia nametraka ny feo ho an'ny fihaonambe roa andro nahomby. ”
N.Freelander-Paice Tale jeneralin'ny programme kapital, California State University, Biraon'ny Chancellor
“Cheryl Cran no 'tena varotra' tena izy
Tsy misy fitenenana mamporisika tsara kokoa, manam-pahaizana ara-psikolojika amin'ny ankapobeny ary manova ny mpanoro hevitra noho ny Cheryl Cran. Mahatoky, am-pahatsorana, mangarahara ary feno fitiavana i Cheryl rehefa nitantara ny zava-niainany tamin'ny asa aman-draharaha sy ny asa ankehitriny.
Ho toerana tsara lavitra izao tontolo izao raha manaraka ny toro-hevitra sy torohevitra nomen'i Cheryl momba ny fanantenana hifandraisany amin'ny hafa sy ny fomba hiatrehana izany izy ireo. ”
C. Lee Filoha, Fikambanana Raytheon Employee
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny fivorian'ny mpitarika anay ary ny lohan-keviny mitondra ny lohateny hoe: Fandrafetana ny hoavintsika - mitarika ny fanovana hahazoana toerana nisy hafatra iray ary ny fandefasana azy dia mety tsara ho an'ny vondrona misy anay.
Ny fikarohana nataon'i Cheryl momba ny ho avin'ny asa sy ny fanovana tokony hataon'ny mpitarika hahatongavana any dia mifanaraka amin'ny fotoana mety sy mifanaraka amin'ny vondrona misy antsika. Ny fikarohana nataony sy ny fanaterana mavitrika dia niteraka lanja lehibe ho an'ireo mpitarika anay mahay manavaka. Ny vondrona misy anay koa dia nirotsaka an-tsitrapo tamin'ny famoahana fanontaniana ary ny fandatsaham-bato izay napetrak'i Cheryl tao amin'ny fehin-keviny. Ny fitaomam-panahy miaraka amin'ny hevitra azo heverina dia vitsivitsy monja amin'ireo fakàn-kevitr'i Cheryl.
Fahombiazana lehibe ny hetsiky ny mpitarika anay ary ampidirinay ho fanasongadinan'ny fahombiazana ankapobeny ny lahatenin'i Cheryl. ”
B. Murao Mpanolotsaina lefitra, fanombanana BC
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny fihaonamben'ny mpitarika anay ary ny lohan-keviny mitondra ny lohateny hoe:" Ny Art of Change leadership - Ataovy izay hahatonga azy io ho zava-dehibe "dia fahombiazana lehibe niaraka tamin'ny ekipa mpitarika ny fivarotana.
Ao amin'ny Rubicon dia mitombo isika ary miaina fiovana marobe anatiny sy fanovàna ivelany. Ny fikarohana sy ny fomba fanaon'i Cheryl ho an'ny vondrona nisy anay dia nisy fiantraikany teo aminay.
Nankasitrahanay ny lahatsoratra, ny fitsapan-kevitra sy ny fifaneraserana miaraka amin'ireo votoaty azo ampiasaina, ny hevitra azo ampiharina ary ny famaliana ny valin'ireo vondrona fanontaniana.
Nanatanteraka ny tanjonay i Cheryl ary nanampy ny ekipa mpitarika ny fivarotana hieritreritra amin'ny fomba vaovao sy avo momba ny fanovana, ny fampidirana ny orinasa ary ny fahombiazan'ny ho avy. ”
R. Care COO, Toeram-panafody Rubicon
“Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny fihaonambenay MISA BC vao haingana ho an'ireo matihanina amin'ny informatika ao an-tanàna - voadona tamin'ny vondrona misy anay ny lahateny fototra an'i Cheryl!
Nankasitraka zavatra maromaro niaraka tamin'ny lahatenin'i Cheryl aho - nisy ny fandanjalanjana ny atiny, ny fikarohana ary ny hevitra miaraka amin'ny aingam-panahy.
Zava-dehibe ny valin-kafatra avy amin'ireo mpanatrika ary dia velom-pankasitrahana izy ireo noho ny fahafahany mametraka fanontaniana amin'i Cheryl sy ny valin-tenin'izy mivady miaraka amin'ny fitsapan-kevitra ho an'ny vondrona.
Ny mpanatrika dia nandao ny fahatsapan-dahatsoron'i Cheryl fa nihanatanjaka, nahazo aingam-panahy ary vonona handray hevitra sy handray andraikitra hiverina ho any amin'ny toeram-piasana ary hapetraka avy hatrany mba hahitana fahombiazana.
Nihoatra ny nantenaintsika i Cheryl! ”
C. Crabtree Komitin'ny federasiona, Fikambanan'ny rafitra informatika monisipalin'ny BC (MISA-BC)
“Manoro hevitra mafy an'i Cheryl Cran ho toy ny hoavin'ny manampahaizana momba ny asa sy ny fanovana izay afaka manampy anao hitety ny ho avinao amin'ity tontolon'ny fanovana ity aho. Nanana mpanazatra tena tsara tokoa aho nandritra ny taonako nianatra. Mazava ho azy ny mpanazatra lehibe rehefa mahita ny valiny amin'ny vondron'olona miara-miasa amin'ny vatana iray mirindra ianao. Fanatanjahan-tena, mozika, dihy - samy manana valisoa sy fankasitrahana ho an'ny mpanazatra mahay avokoa. Ny coaching ataoko ho an'ny mpiasako dia zavatra kely amin'ny ligy. Fantatro fa raha mila ny fampisehoana ekipa matihanina aho dia mila mpanazatra matihanina. Cheryl Cran dia an'ny ekipan'ny Mpitarika MyMutual. Nihaona voalohany tamin'i Cheryl Cran izahay tamin'ny 2014 rehefa nangatahina ho mpandahateny indrindra amin'ny Seminaritra Broker fanao isan-taona. Tonga aloha i Cheryl, nihaona tamin'ireo mpanatrika ary nanome fehezanteny mahafinaritra momba ny Leading Change. Cheryl dia mpitondra tenin-tsoratra voalohany. Ny fomba faharoa ahalalako an'i Cheryl dia amin'ny maha Coach Executive. Sady mpanazatra no mpitaiza tamin'ny fitomboan'ny tenako ho CEO. Ary izy izao no mpanazatra ny ekipan'ny Mpitarika antsika, mihantsy sy mitazona antsika ho tompon'andraikitra. Ny ekipa mpitarika anay dia mandray ny NextMapping Online Fanofanana momba ny fitarihana fampianarana natolotry Cheryl Cran. Azo jerena an-tserasera ny fampianarana ary ahitana ny iray amin'ireo fiantsoana mpanazatra. Azontsika atao ny mampihatra izay ianarantsika amin'ny toe-javatra tena misy, miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanazatra ho an'ny ekipanay. Ny fomba manokana natolotry ny mpanazatra sy consulting Cheryl dia:
Ny fahazavana amin'ny iraka sy ny vinavinanay izay nanampy anay hampiakatra ny lanjan'ny mpiasa sy ny mpanjifa
Torolàlana momba ny fananana ny 'olona marina' ao amin'ny ekipa hitarika ny orinasa ho avy
Ny fitaomam-panahy sy ny loharanon-kevitra manokana hanampiana antsika hikarama, mpanazatra ary hampitombo ireo mpikambana ao amin'ny ekipantsika
Ny fanamorana ny ekipa mpitarika mba hampitombo ny filaharan'ny fahaiza-manao, miasa ny ekipa ary mitazona andraikitra amin'ny tanjona
Manampy antsika hampitombo ny fisainana stratejika, mamorona kolontsaina mpitarika iraisana ary hampitombo ny firotsahan'ny mpiasa
Fampitomboana angovo sy fientanam-po amin'ny ho avy sy ny fomba ahafahantsika mamorona azy amin'ny maha ekipa antsika ”
"Niverina fanindroany i Cheryl mba hanamorana sy hamaritana ny fihemoranay 1.5 andro isan-taona ho an'ireo mpiasan'ny tanàna, mponina voatendry, vondron'orinasa ary mpiara-miombon'antoka amin'ny tanàna hafa, ary fahombiazana lehibe izany. Nisy mpanatrika anay nilaza fa mbola tsara kokoa io tamin'ity taona ity noho ny tamin'ny taon-dasa ary noho ny fahaizan'i Cheryl manam-pahaizana sy manam-pahaizana, ny fifampiraharahana amin'ireo mpandray anjara sy ny fanomanana azy. Niresaka tamin'ny mpandahateny vahiny tsirairay momba ny fandaharam-potoana mialoha i Cheryl mialoha ny hetsika ary nanome toky fa nandeha ny fandaharam-potoana mba hisy fiatraikany lehibe amin'ny fihemorana ankapobeny. Ny lohahevitray dia ny 'NextMapping' ny hoavin'ny asa misy ny fanavaozana, ny haitao, ny fitarihana ary ny kolontsaina. Ny lahateny lehibe napetrany nandritra ny fisotroan-dronono dia nahitana ny fisokafan'ny andro voalohany ary ny andro faharoa. Cheryl dia manana fahaiza-manao miavaka hitondra fomba mahaliana sy manentana ny fanahy izay mamorona vahaolana vaovao ary koa fomba azo ampiharana ireo hevitra nozaraina. Ao amin'ny lahateniny misokatra dia nametraka ny feo manentana ny amin'ny hoavin'ny asa izy ao anatin'izany ny fiantraikan'ny haitao sy ny fomba ilain'ny olona hifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanovana. Ny teny famaranana nataony tamin'ny andro voalohany dia nifantoka tamin'ny NextMapping ny ho avin'ny fitarihana sy ny dikan'izany amin'ny hoavin'ny asa ho an'ireo ekipa sy mpandraharaha. Ireo mpandahateny amin'ny fandaharam-potoana dia nandrakotra ny tanàna marani-tsaina, orinasan-tsarimihetsika manerantany, fanavaozana, fisainana mamorona, fitehirizana nomerika manan-tantara, drôna sy maro hafa. Tamin'ny andro 2 dia naverin'i Cheryl ny tontolo andro sy tapany iray manontolo ary nampidiriny ireo singa manan-danja avy amin'ny mpandahateny tsirairay tao amin'ny fehezanteny famaranana nataony. Isaky ny niara-niasa tamin'i Cheryl izahay dia nahazo tombony tamin'ny fanavaozana bebe kokoa, sy ny fiaraha-miasa ao anatin'ny ekipan'ny tanananay. Hitanay fa ampahany lehibe amin'ny fifantohana fanavaozana isan-taona i Cheryl ary manantena ny hiara-hiasa aminy imbetsaka amin'ny ho avy. ”
W. Foeman - Mpanoratra ao an-tanàna Tanànan'ny Coral
"I Cheryl no mpitondra tenintsika nandritra ny Forum momba ny toekarena UVA Wise ary nanolotra ny" Ny ho avin'ny asa izao - vonona ve ianao? " Ny valinteny avy amin'ny mpihaino antsika dia nahitana ny fanehoan-kevitra toy ny: "Fomba fijery mahafinaritra sy manentana ny ho avy" "Tia ny fifangaroan'ny fahaiza-miasa miaraka amin'ny fanosehana hanampy antsika hanana fanavaozana bebe kokoa" "Hevitra Phenomenal amin'ny fomba ahafahantsika manavao sy mampitombo ny famoronana tena izy ho an'ny fahombiazana amin'ny ho avy "" Fikarohana sy statistika tsara momba ny hoavin'ny asa sy ny maha-zava-dehibe azy roa amin'ny fanabeazana sy ny orinasa "" aingam-panahy avy Cheryl Cran "Tena hanana an'i Cheryl hiverina izahay hanome fanazavana bebe kokoa momba ny hoavin'ny asa, ny fanavaozana ary ny fitarika ny fanovana."
B. Joyce University Virginia ao amin'ny Wise
“Cheryl Cran dia nalaza tamin'ny kaonferansa ISBN anay. Ny atiny Cheryl dia tonga ara-potoana tsara ho an'ny vondrona tompon'andraikitra C-Level satria nanampy azy ireo handamina kaonferansa feno hevitra ho paikady mivaingana hampandroso ny fikambanan'izy ireo izany. Ny vondrona misy anay dia tena mahay manavaka ary afaka mitsikera ireo mpandahateny ivelan'ny sehatry ny salon sy spa, fa ny volavolan-kevitr'i Cheryl kosa ary vola teo amin'ny vola. Cheryl dia nanamboatra ny teny fototra ho an'ny vondrona misy anay, Ny hoavin'ny asa izao - Efa vonona ve ny salon-nao? ary ny hafany dia ny fandanjalanjana ny fikarohana, ny hevitra mifandraika, ny fijery manazava ny ho avy ary koa ny fiomanana amin'ny fikorontanana amin'ny ho avy. Tsy toy ny ankamaroan'ny keynotes, i Cheryl dia nanolotra mavitrika fitaovana fanaovana teaser, anisan'izany ny bilaogy iray ary nanolotra fanadihadiana ny mpanatrika ary koa ny fanaovana fifandraisan-davitra mivantana ary nampiditra ny hevitr'izy ireo tao amin'ny fehezanteniny. Izahay koa Cheryl nanamora ny fifanakalozan-kevitra momba ny fisarihana talenta ambony ary ny vondrona misy azy dia efitrano fijoroana ihany. Tsy hisalasala izahay hanome azy ny hafa. ”
V. Tate Mpanatanteraka Tate Tambajotra ara-barotra iraisam-pirenena momba ny salady iraisam-pirenena
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika sy mpanamory ny atrikasa ho an'ny Fihaonamben'ny mpitarika Calgary Stampede. Ny hevi-dehibe napetrany: Ny ekipa vonona amin'ny ho avy - ny fomba famoronana ekipa mailaka, mahay mampifanaraka ary ho avy dia tena nahavariana ary tena nahasarika an'ireo mpitarika ny vahoaka.
Nandritra ny atrikasa, maro amin'ireo mpitarika ny olontsika no nandefa hafatra tamin'i Cheryl nandritra ny teny ifotony ary tena nankasitraka ny fanazavany lalina sy ny valiny tena izy. Ireo mpitarika ny vahoaka dia faly tamin'ny atiny ary dodona ny hampihatra izay nianarany tamin'ny andraikiny. Ny fotoanan'i Cheryl sy ny fikarakarany ny fiomanana sy ny fiantohana fa mifanaraka amin'ny vondrona misy anay dia nankasitrahana indrindra, anisan'izany ny fanadihadiana nataony taloha ho an'ny mpanatrika, ny fandatsaham-bato nandritra ny lahateny fototra ary koa ny hafatra an-tsoratra momba ny fanontaniana. Nataon'i Cheryl modely tahaka ny ahoana ny fampiasana teknolojia eo am-panaovana sy handrisihana ny olona handeha amin'ny 'me to we'.
Cheryl dia nanome fomba fijery tsara momba ny fironana amin'ny ho avy misy fiatraikany amin'ny orinasa ary nanome hevitra famoronana vitsivitsy momba ny fomba ahafahantsika mampiasa ny fahombiazantsika. Ny fomba fiasan'i Cheryl dia intuitive, mifototra amin'ny fikarohana ary mifandray be izay tonga lafatra ho an'ny vondron'ireo mpitarika manavaka. "
D. Bodnaryk - Tale, Serivisy ho an'ny olona
Ny fampirantiana Calgary sy Stampede Ltd.
“Faly aho nampiaraka an'i Cheryl Cran ho an'ny atrikasa lehibe iray misy ny mpiasa rehetra, misy mpiasa an-jatony. Cheryl nanolotra ny Hoavin'ny asa ankehitriny - Vonona ve ianao amin'ny hetsika mandritra ny andro. Tsy ny lahateny lehibe ihany no naoriny, fa ny famintinana ihany koa ny androany mba hanandratana ny fahatsapana / dikany fanaovana traikefa ananan'ny mpanatrika. Nankasitrahanay ny fahafahany mampiditra lafin-javatra amin'ny hetsika rehetra tamin'ny androny tamin'ny famintinana famaranana - niavaka tokoa ny nisafidianana ny tsy manam-paharoa sy ny intuitive ny kolontsaina mampiavaka ny vondrona. Ireo nanatrika ny andro dia nanoritsoritra ny famelabelaran-tenin'i Cheryl ho famporisihana sy hery. Nizara ny olona iray fa namorona angovo be dia be izy, mora ny nientam-po tamin'izay nitranga tao amin'ilay efitrano. Ny keynote sy ny famaranana an'i Cheryl dia singa iray lehibe amin'ny atrikasanay mandritra ny tontolo andro, manampy betsaka amin'ny 'fahombiazany. Tena handinika ny hiara-miasa aminy indray izahay ary tena amporisihiko i Cheryl Cran ho mpandahateny ho an'ireo fikambanana miatrika fiovana na mety te hijery ireo lohahevitra momba ny fanovana, ny fizotry ny asa na ny antony manosika. Misaotra, Cheryl fa manana fomba mahafinaritra amin'ny teny ianao. ”
L. Masse Tany ambonimbony
"Cheryl no tena tonga lafatra indrindra amin'ny fihaonambenay ho avy - manana vondron'olona mpitarika sendikaly manana fahaiza-manavaka isika izay mirehareha amin'ny maha-lohalaharana azy ireo ary nanohitra azy ireo i Cheryl mba hieritreritra bebe kokoa amin'ny famoronana, hanitatra ny fomba fanavaozana ary koa manangana paikady ho avy mifototra amin'ny zava-misy miova haingana amin'ny indostrian'ny serivisy ara-bola. Izahay dia tena mamporisika an'i Cheryl Cran ho lasa manam-pahaizana momba ny asa ary mpandaha-teny. ”
J. Kile futures Summit Credit Union executive executive MN
“Ny famelabelaran-kevitr'i Cheryl momba ny Future of Work dia nanolotra ora mifampiresaka sy manintona hanombohana ny hetsika. Tian'ireo vahininay manokana ny fandraisan'anjaran'ny mpijery sy ny hetsika miorina amin'ny porofo izay azon'izy ireo entina miverina avy hatrany any amin'ny ekipan'izy ireo mba hampiharina. Navoakany teo ivelan'ny valan-javaboary izany ho an'ny mpihaino HR 350, manampahaizana manokana amin'ny fampiroboroboana talenta. ”
J. Palm, talen'ny fitantanana TeamKC: fiainana + talenta
"Nandritra ny hetsika fanaon'ny mpiasa isan-taona, Cheryl dia nanao adiresy fanentanam-panahy sy fampahalalana momba ny ho avin'ny asa sy ny fiantraikany eo aminay. Niara-niasa akaiky taminay izy mba hanamboatra ny adiresiny mba hahazoana antoka fa misy ifandraisany sy mahasoa amin'ny mpiasanay. Ny resaka nataon'i Cheryl dia nampahatezitra ary nahazo hery. ”
“Cheryl dia manam-pahaizana manokana tamin'ny fivoriana isan-taona fanaovan-tsika isan-taona - nasehony momba ny fanovana mpitarika sy talenta talenta. Taminà ambaratonga ambony dia nahita ny fomba fiasan'i Cheryl izahay, mifandraika amin'ny ekipan'ny mpitarika sy ny modely nasehony dia mifanaraka amin'ny tanjonay mandritra ny fihaonambe. Ny vokatra farany dia ny namela antsika ho te hahafantatra bebe kokoa momba ny fihodin'ny fanovana ary hijery akaiky kokoa ny fomba hanohanana tsara ny mpitarika anay ho mora sy mora amin'ny fanovana mitohy. ”
WB, Fikarohana sy fampandrosoana BASF
"Ny tarika dia nanondro an'i Cheryl 10 tamin'ny 10 ho mpandahateny izahay. Izy no mpiteny manan-danja indrindra nahazo mari-pahaizana taminay nandritra ny fihaonantsika. Nihoatra ny nantenainay! ”
PDG Fikambanam-pirenena Marketing Agra
“Niasa taminay i Cheryl tamin'ny fialànay voalohany eran'ny tanàna. Ny fialan-tsasatra dia nifantoka tamin'ny lohahevitra marobe momba ny fanavaozana sy ny fanovana mpitarika. Nanasa mpandahateny izahay hihemotra izay sady mpanjifa anatiny sy ivelany no mikarakara ny fikambananay. Ny fahaizan'i Cheryl dia azo jerena amin'ny zavatra rehetra, anisan'izany ny fanomanana mialoha ny hetsika sy mandritra ny fialantsasatra maharitra iray andro sy sasany. Nandritra ny fisotroan-dronono dia nahay nifehy i Cheryl ary nanampy ny mpitarika tsirairay handrafitra ny ho aviny ho an'ny tenany sy ny orinasany. ”
W. Foeman Tanànan'ny Coral
“Niara-niasa tamin'i Cheryl imbetsaka aho ary nandondona izany tao ivelan'ny valan-javaboary ny hetsika tsirairay. Mihaino izay ilainao sy izay ezahanao hanatontosana ny hetsikao izy, mitondra hafatra azo ampiharina miaraka amin'ny sary tsy hay hadinoina izay mitaona ny mpijery. Ny fanombanana ny famelabelaran'i Cheryl dia marika ambony be foana. Marina izy, mavitrika ary matihanina. Manome isaky ny mandeha izy! ”
Tompon'andraikitra ambony CREW Network Foundation
"Nasainay hiaraka aminay i Cheryl amin'ny maha-mpiteny manan-danja indrindra amin'ny fihaonambe isan-taona 2017 Canadian Association for University momba ny fampianarana mitohy. Ny lakilasin'i Cheryl "Leading In the Currents of Change" dia tonga lafatra ho an'ny vondrona mpanabe anay. Cheryl voaomana amin'ny alàlan'ny fanadihadihana mialoha ny mpanatrika alohan'ny fotoana ary nanamboatra ny lahateniny izy mba hamahana ny filanay sy ny toe-javatra misy azy manokana. Ny nankasitrahan'ny solontena ny fihaonambe no nihaona taminy. Ny fehikibo nataon'i Cheryl dia nanantitrantitra ny eritreritsika momba ny fomba ilaintsika mamolavola toe-tsaina fanavaozana ho mpitarika ny fanovana ary ny fomba ilaintsika hanomanana ny mpianatra mitohy ho vonona amin'ny asan'ny ho avy. Ireo modely nataon'i Cheryl momba ny fihodinana fanovàna ary amin'ny sehatra efatra hanavaozana ny fitantanana dia fitaovana tena ilaina izay ahafahantsika mihala sy mihatra avy hatrany. Manome lanja ny fomba fiarahany miasa izahay amin'ny fanaovana izay hahombiazantsika ny fihaonambe. ”
Dean pro tem Fianarana ny Lifelong Simon Fraser University
"Cheryl Cran no mpandahateny fanalahidy ho an'ny fizahan-tany 2017 traikefa zahana any Atlanta sy Chicago, ary faran'izay niavaka izy! Angovo mahery vaika hanakatonana ny andro ary hamela ireo nanatrika ireo aingam-panahy handray andraikitra. Ny hoavin'ny fikarohana nataon'i Cheryl dia nanasongadina ny filàna mifantoka amin'ny traikefa amin'ny mpiasa ho fitaovana hananganana traikefa lehibe amin'ny mpanjifa. Nanolotra hevitra sy vahaolana ho an'ny mpitondra ho fanomanana ny ho avy izy ireo. Ny valin-kafatra avy amin'ny mpanatrika dia tena tsara ary tian'izy ireo ny fomba nahatonga an'i Cheryl hisaina azy ireo! Cheryl dia mpilalao ekipa tena. Fahombiazana lehibe ny hetsika nataonay ary misaotra azy amin'ny fandraisana anjara izahay. ”
Talen'ny marketing Appirio
“Vao tsy ela akory izay dia nanana ny manampahaizana momba ny Future of Work Cheryl Cran ho mpitondra tenin-dahatsoratra nandritra ny Fihaonamben'ny mpikaroka World World / Business Analyst isan-taona, ary tamin'ny teny iray dia nahay izy! Ny mpanatrika dia nanome isa an'i Cheryl ho iray amin'ireo mpiteny fototra indrindra ary ny lohateny hoe "Ny hoavin'ny asa izao - fiovana 5 ho an'ny ho avy" no voadona. Ny fomba fakan-kevitr'i Cheryl momba ny foto-keviny dia nankasitraka izaitsizy - nampidiriny ny angon-drakitra nofakafakaina avy amin'ireo mpanatrika ary tao amin'ny keynote dia nomeny vahaolana sy hevitra namboarina izay azo apetraka eo noho eo ho an'ny mpanatrika. Ny combo an'ny angovo mavitrika, ny fahaiza-mitarika, ny atiny tena misy ary mifandraika amin'ny fomba mahafinaritra sy mahasarika no fomba tonga lafatra ho an'ny vondron'ireo mpitarika ny tetik'asa sy mpandinika momba ny asa aman-draharaha. Manantena ny fotoana hiara-hiasa amin'i Cheryl indray izahay. "
Talen'ny tarika vondrona ProjectWorld*BusinessAnalystWorld
"Amin'ny anaran'ny zom-pirenena iraisam-pirenena sy ny LexisNexis Canada, te-hisaotra anao aho amin'ny fanolorantenanao tamin'ny alàlan'ny fihaonambe fanavaozana ho an'ny alatsinainy. Ny valin-kafatra azontsika momba ilay hetsika ary ny fampitaovana anao, indrindra, dia tsy misy afa-tsy zavatra tsara. Ny famelabelaranao no lalana tonga lafatra ho anay hitadidy ny andro, handinihana ny fanavaozana amin'ny heviny lehibe kokoa. ”
Mpitantana tetik'asa Tarika Fihaonana an-tserasera
"Nanana an'i Cheryl izahay," Mpitondra Transformational - Breaking Down Silos "nandritra ny fihaonambem-pirenena PRSM ary izy dia nifanena tamin'ny andiany manatrika anay. Eo amin'ny sehatry ny fivarotana varotra dia maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana mikarakara ny fomba hiaraha-miasa, hanova sy hitarika amin'ny ambaratonga avo kokoa. Ny fotoam-pivoriana nataon'i Cheryl dia nanome fikarohana momba ny ho avin'ny asa, ny fahitana feno fihantsiana momba ny fitarihana ilaina, ary hevitra feno fijery momba ny fomba hanamboarana ireo silos ary hananganana kolontsaina mifanintona sy famoronana kokoa. Ny heriny amin'ny angovo mahery vaika sy ny fampiasana fifaneraserana mahafinaritra, ny sarimihetsika ary ny fahitana horonantsary dia nisy fiantraikany. Cheryl dia nanome fiantsoana sy ohatra amin'ny 'ahoana' ho lasa mpitarika mpanova izay afaka mitarika fiovana ankehitriny sy ho amin'ny hoavin'ny asa. Vokatry ny votoatin'ny Cheryl sy ny mari-pahaizana ambony, dia nanapa-kevitra ny hitondra azy hiverina izahay hanatrika ny fihaonamben'ny Mid-Year. ”
Filoha lefitra momba ny fampandrosoana famolavolana Fikambanana PRSM
"Nanana ny fihaonamben'ny Gartner Conference ho an'ny Data Center, Infrastructure, & Operations matihanina isan-taona izahay ary naverinay i Cheryl Cran, hoavin'ny manampahaizana momba ny asa sy ny fanovana, hatolotra ho isan'ny làlan'ny mpitarika anay. Ny fotoam-pianarana Cheryl's leadership Leadership @ The Core of Change dia efa voasoratra mialoha ary feno indray amin'ity taona ity. Ireo mpihaino antsika manavaka ny lohateny IT dia mitady vahaolana azo tsapain-tanana, hevitra ary fitaomam-panahy rehefa asaina manome andraikitra, mitaona ary manova ny toerana iasan'izy ireo amin'ny ho avin'ny asa izy ireo. Cheryl dia nanolotra izay tena nilaina indrindra sy ny maro hafa - ny fikarohany sy ny statistikanay, izay naseho tamin'ny horonan-tsary, ary ny fomba mivantana nifandraisany dia tena nahavariana ny vondrona misy anay. Manantena ny hiara-hiasa amin'i Cheryl indray izahay. ”
"Cheryl Cran, Manam-pahaizana amin'ny ho avy miasa sy manova ny lohan'ny mpitarika dia nahafinaritra tokoa tamin'ny teniny" Ny hoavin'ny asa - Mpitondra fiovana avokoa ny olona rehetra "- nisy nanamarika toy ny" Cheryl no mpiteny teny faran'izay tsara indrindra azontsika hatramin'izay " "Zava-mahagaga ny fomba fampiasana an'i Cheryl miaraka amin'ny votoaty mahafinaritra sy mahasarika". Ny isan'nay VIP dia samy nahazo ny boky nosoratan'i Cheryl hoe "The Art of Change Leadership - Fiovana Fiovana Ao Amin'ny Tontolo iainana haingana" ary faly be niresaka tamin'i Cheryl taorian'ny fehin-keviny raha nanao sonia ny kopikany tsirairay izy. Cheryl sy ny mpitantana ny biraony Michelle dia ekipa dinamita - mora ny miara-miasa amin'ny taloha, mandritra sy aorian'ny hetsika. Misaotra anao Cheryl tamin'ny fanampiana anay hanome lanja ambony indrindra ho an'ireo mpanatrika ny AIIM 2017 ″
"Nasainay nanatevin-daharana anay i Cheryl ho mpitondra tenin'ny Keynote ho an'ny fihaonamben'ny GEA any Puerto Vallarta tamin'ny Janoary 2017. Ny lakilasin'i Cheryl Ny ho avin'ny fambolena dia ankehitriny! dia fahombiazana lehibe niaraka tamin'ny mpihaino antsika mahay manavaka ny mpivarotra sy ny mpanjifa amin'ny sehatry ny fambolena. Ny fomba fiasa mivantana sy mahasarika azy ary ny fisaintsainany izay nanadihady dia nanamboatra ny fihetsikay niaraka taminay. Cheryl dia nanome fahalalana momba ny ho avin'ny mpitarika ary ny fomba fivoaran'ny fitarihana ho valin'ny fitomboan'ny teknolojia sy ny fiovana demografika. Nasiany fanamby ilay vondrona mba hamelatra ny fahaizan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny 'rafitra fiasa' izay ahitana ny fahaiza-mamorona, famoronana vaovao ary fitomboana hitarika ekipa mpamokatra. Ny paikadiny momba ny fahazoana sy ny fihazonana azy dia ny fisokafan-java-maso ary tianay fa nanome azy ny 'antso ho amin'ny hetsika »hamerenan'ny mpihaino azy ireo any amin'ny toeram-piasan'izy ireo. Cheryl dia voadona mafy tamin'ny andianay! ”
PDG GEA Farm Technologies Etazonia
“Cheryl Cran no teny ifotoranay ho an'ny kaonferansa Central Union Credit 1 ary izy no safidy tonga lafatra tanteraka! Mifototra amin'ny bokiny vaovao, Ny Art of Change Leadership no tena nilain'ny vondron'ireo mpitarika Union Credit anay. Betsaka ny mpitarika no nilaza fa nahalala zava-baovao izy ireo, ary manome lanja ny fomba fiasa raisin'i Cheryl ho avy amin'ny asa ary hanova ny fitarihana. Ny fomban-keviny dia mahafinaritra, mifampiresaka, mitaona saina ary indrindra manome hevitra azo ampiharina izay azon'ny mpitondra ampiasaina eo noho eo. Cheryl no IZAY nisongadina tamin'ny kaonferansa nataonay. ”
Central Union 1 Credit Union
"Cheryl Cran dia notoloran'ny vondrona Kaiser iray hafa niara-niasa taminy- ary vao tsy ela akory izay no nanakarinay azy ho mpitondra teninay farany ho an'ny fivoriana fanao isan-taona - mety tsara izany! Ny hafatr'i Cheryl dia namboarina tanteraka mifototra amin'ny asantsika, ny mpihaino isan-karazany ary nanidy tsara ny fihaonambenay izy. Afaka nanenona ny atiny avy tamin'ny singa hafa amin'ny programa izy ary koa nanatrika ireo fanamby manokana natrehin'ireo olona ao amin'ny ekipanay ary nanome hevitra manome aingam-panahy. Ny tantaram-piainany sy ny zavatra niainany niaraka tamin'ny fahitany intuitive sy ny fandefasana mavitrika dia nanome aingam-panahy ny vondrona anay ary fomba iray nahafinaritra nanatanterahana ny kaonferansa nataonay! ”
Manampy an'i Kaiser Permanente ny mpiasa federaly VP
"Cheryl Cran dia tsy Sheryl Crow fa kintana rock izy ary tsy izany! Manana an'i Cheryl ho mpandahateny ifotony ho an'ny andian-fandaharana ho an'ny ekipa mpitarika anay izahay. Niara-niasa taminay tamin'ny hetsika am-polony mahery i Cheryl izay nanaterany mpitarika 6000 teo ho eo ho an'ny ekipa vonona ho avy. Ny fahaizany manenona ny hafatry ny mpanentana hafa, ny fahaizany mampifandray ireo tarika amin'ny hatsikana, fahafinaretana, fahamendrehana ary eritreritra fihantsiana dia tena nahagaga tokoa ary mazava ho azy izay ilainay ho akaiky ny zava-nitranga. ”
University University VP AT&T
"Cheryl Cran no Andro faha-2ndnay androany maraina ho an'ny fihaonantsika isan-taona septambra 2016 ary amin'ny teny iray hoe" WOW! ' Cheryl dia mitondra angovo mahery vaika, eritreritra, hevitra azo ampiasaina ary maro hafa ao anatin'ny teny fanalahidy. Tianay ny fihetsiketsehana misoratra sy tafiditra ao anatiny, anisan'izany ny fananana hafatra an-dahatsary ho an'ny mpamaky ary hampiasa ny media sosialy hametrahana ny fanontaniany mandritra ny fehin-keviny - tena mibontsina! Nataony nihomehy izahay ary nasainy nijery tsara ny tenanay izahay mba hahitana raha miova mpitarika izahay. Tiavo ny fifandanjan'ny fifantohan'ny mpihaino miaraka amin'ireo modely mahery vaika izay manome ny olona ny 'fomba' ho lasa mamorona kokoa sy ny fomba azo ampifanarahana kokoa amin'ny hoavin'ny asa. Samy nandao ny fotoam-pivoriana azy ny tsirairay fa nahatsapa fa manana hery, mihamahery ary vonona handamina ny ho avy izao! "
J. Moore SM
“Cheryl Cran dia mpandahateny lehibe tamin'ny Konferansa ho an'ny mpampiasa - ary amin'ny teny iray dia 'nahafinaritra' izy. Ny fehezan-teny mitondra ny lohateny hoe "Fiovana mitarika eo amin'ny toeram-piasana haingam-pandeha sy haitao" dia tonga lafatra ho an'ny vondron'ireo matihanina momba ny fahasalamana. Tian'ireo olona haingana ny fandefasana azy haingana sy miaraka amin'ireo maodeliny izay nampiseho ny 'fomba' hahatongavana ho mpitarika fanovana sy ny fahaiza-manao ilaina. Ny fifantohana amin'ny vahaolana famoronana fotoana tena izy dia zava-dehibe ho an'ity vondrona ity ary ny singa hetsika dia nanome ny tsirairay zavatra tena ilaina mba hametraka ilay asa. Modely Cheryl izay resahany - taloha, nandritra ary aorian'ny keynote dia malefaka izy ary mora ny niara-niasa. Izahay dia tena manome sosokevitra an'i Cheryl amin'ny fivoriambenay! ”
Tricia Chiama, Coordinator Sr., Serasera fampianarana sy fianarana malina
"Cheryl Cran dia loharano manan-danja amin'ny Fihaonamben'ny Fihaonamben'ny Fiangonana isan-taona, ka mitondra angovo sy fientanam-po ho mpitondra tenin'andraikitra amin'ny fanokafana sy faran'ny fihaonantsika. Cheryl dia nizara ny heviny sy ny fahalalany momba ny ho avin'ny asa ary manova ny fitarihana, manamboatra ny fampisehoana azy amin'ny orinasa sy mpihaino antsika. Niara-niasa taminy izahay mba hiantohana ny hafatra mandritra ny fivoriana, mifanaraka sy mifandraika ary manana lanja lehibe ho an'ny tarika mpiara-miasa. Nanampy tamin'ny fanentanana ny ekipanay izy, namela ny olona hanana hevitra azon'izy ireo apetraka avy hatrany eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny toeram-piasana ankehitriny. Nankasitrahanay tokoa ny fananana an'i Cheryl ho fantsom-pisaorana anay ary misaotra azy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanentanana ny firaisantsika hieritreritra sy hanao zavatra hafa mba hahitana fahombiazana amin'ny ho avy. ”
Pat Kramer, Tale Jeneraly BDO Canada
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny Fihaonambe SilkRoad fanao isan-taona ary tamin'ny teny iray dia nahagaga izy! Ny mpihaino HR savvy teknolojia anay dia talanjona tamin'ny fomban'i Cheryl sy ny fandefasana atiny tena sarobidy, mifandraika ary manandanja momba ny fitarihan'ny fanovana sy ny ho avin'ny asa. Cheryl dia nanao fanamby tamintsika rehetra mba 'hanatsara ny OS leadership' ary hitrandraka ny fahaizantsika mamorona ara-potoana. Nanolotra ny toe-javatra nilaina ny mpihaino antsika hahatakatra ny fomba hitarihana sy hitantanana ny fanovana misy fiantraikany. ”
"Cheryl dia iray amin'ireo mpampaha-teny lehibe tamin'ny fihaonamben'ny mpitondra fanao isan-taona izahay. Ny filamosan'ny Cheryl's Future of Work Is Now no tsara ho an'ny vondrona misy anay. Ao amin'ny fanovana sy fanakorontanana be loatra ny indostria ara-bola - nanolotra fikarohana sy fitaovana ho an'ny mpitondra anay i Cheryl hampitombo ny fahaiza-mamorona sy fanavaozana nefa mahafinaritra. Ny hafany dia nanampy ny fampahatsiahivana antsika ny zavatra mila ataontsika isan'andro amin'ny maha-mpitarika azy, izay hitaomana ny fitomboana sy ny fanavaozana. Ny horonantsary miaraka amin'ny antontan'isa sy ny ohatra momba ny raharaha momba ny raharaha nomeny an'ireo orinasa izay manantona ny ho avin'ny tetik'asa momba ny asa dia nanampy tamin'ny fanomezana konti-javatra izay efa ataontsika tsara sy izay azontsika atao hanohizana. Ny andiany mpitarika mahay manavaka dia nahazo aingam-panahy ary Cheryl nitady hafatra lehibe avy amin'ireo mpandahateny teo aloha dia nahatonga azy io ho faran'izay lehibe amin'ny fihaonambe! ”
L. Skinner CEO voalohany West
"Nanana an'i Cheryl ho mpandahateny ifotony sy ny famelabelaran-keviny" The Energetic States - Ny tsiambaratelon'ny famokarana sy ny fahombiazana eo amin'ny sehatry ny asa "dia noraisin'ireo solontena solontena tsara izahay. Ny fanadihadian'i Cheryl talohan'ny hetsika, izay nalefanay ho azy, dia namela azy hanamboatra ny fandaharan'asany ary mifototra amin'ny valiny azony, dia namorona famelabelarana iray izay feno hery lehibe hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy. Ny fikarohana nataon'i Cheryl momba ny hoavin'ny asa sy ny paikadiny momba ny fitarihana fiovana amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo dia nanjary lohalaharana. Misaotra Cheryl! ” T. Tse Manager, Zavatra Mpanao kaonty matihanina momba ny British Columbia
“Ny fehezantenin'i Cheryl Cran“ Ny hoavin'ny asa - vonona ve ianao ”dia nifanaraka tanteraka tamin'ny lohahevitra HRIA Conference 'Navigating Booms and Busts'. Cheryl dia nanokana fotoana hahafantarana tsara ireo mpanatrika anay alohan'ny hanaterany ity fehezanteny famaranana tena namboarina ity. Ny fanadihadian'i Cheryl talohan'ny fihaonambe ary ny fahatongavany ny marainan'ny fivoriana hijerena ireo famelabelarana ny andro hanenomana ny votoatiny ho ao anatin'ny fanehoan-kevitra famaranana dia niavaka. Ny fampiasan'i Cheryl fikarohana, fitaovana matanjaka hanampy antsika amin'ny fomba 'ahoana' sy fomba fifanakalozana mahafinaritra dia voadona tamin'ny mpihaino anay. Nampiditra ny vondrona tamin'ny alàlan'ny fanontaniana an-tsoratra izy ary ny tenirohy Twitter anay dia nalaza nandritra sy taorian'ny fotoam-pivoriany. Cheryl dia fahafinaretana tanteraka hiara-miasa. ”
J Chapman, CMP Institute of Human Resources of Alberta
“Nandondona azy avy tany amin'ny zaridainam-panjakana i Cheryl Cran! Cheryl no fanokafana fanokafana tamin'ny fihaonantsika isan-taona ny aprily 1st, 2016 ary fiandohana tena tsara izy io. Manintona, nanentana, mampihomehy be dia be mandritra izany izy! Ny hafatra nampitainy dia ny lohahevitra ary mifandraika be amin'ny toeram-piasana ankehitriny. Manoro hevitra azy aho amin'ny fihaonambe anao! ”
Fihaonamben'ny Fihaonambe CUMA
“Misaotra indray tamin'ny fivoriana MAHAMONINA omaly. Sarotra ny hampifaly ny vahoaka ahy, ary nahazo valiny tsara be dia be avy hatrany aho taorian'ny lahateninao. Nomenao herim-po sy mailo ary nandray anjara tamin'ilay fihaonambe farany tamin'ny fifanintsanana 2 andro ny ekipa. Tsy asa mora. Manoro hevitra anao aho amin'ny fotoana rehetra! Misaotra hatrany ary manantena aho fa afaka hiampita ato ho ato ny lalanay. ”
Vahaolana amin'ny CBC & Radio-Canada
"Cheryl Cran no mpandray fiteniteninay atoandro tamin'ny Fihaonamben'ny NOHRC 2016 - ny fehizorony miaraka amin'ny fahitana 2020 - Miova ho fitarihana ho an'ny Profesionan'ny HR dia mety tsara ho an'ny vondronay HR. Ny hafatra nentiny momba ny fanovana mpitarika sy ny fiomanana ho amin'ny ho avin'ny asa izao no tena tokony ho rentsika rehetra. Cheryl dia nampifandraisin'ny mpihaino azy, nifanerasera, nibitsika tamim-pahatezerana ary nandefa ireo fanontaniany izay novaliany mivantana sy nieritreritra izany. Nahazo valiny feno fientanentanana avy amin'ireo mpanatrika izahay - tena afaka manome torohevitra tokoa izahay Cheryl Cran amin'ny fihaonambe na hetsika ataonay! ”
Filohan'ny NOHRC Conference 2016
"Nanana an'i Cheryl Cran ho mpandahateny lehibe ho an'ny fivorian'ny mpanjifa vao tsy ela akory izahay ary ny hafatra hoe" Fiovana mitarika eo amin'ny toeram-piasana haingam-pandeha sy haitao "dia marina. Tianay ny manam-pahaizana momba ny haitao sy manam-pahaizana mahay mandefa hafatra amin'ny mpanjifanay izay afaka manome lanja azy ireo amin'ny sehatry ny fahasalamana ary koa manome hafatra momba ny toeram-piasana miova. Ny fomban'i Cheryl izay nahafaly azy teo am-pitaterana hafatra manan-danja sy tena ilaina amin'ny fomba fanao 'leadership leadership', fiaraha-miasa amin'ireo taranaka sy fampiasana teknolojia dia noraisin'ireo mpanatrika tamin-kafanam-po tokoa. Nangataka hafatra 'esorina' izahay izay azo ampiharina ary nomen'i Cheryl izany sy ny maro hafa - tena hiara-hiasa amin'i Cheryl indray izahay ”.
Seza / sy nandamina Fihaonambe 2015 ara-pahasalamana fahadimy isan-taona
"Cheryl Cran dia mpandaha-teny ho an'ny Forum Hospitality Leadership Forum, ampahany amin'ny Hotely Iraisam-pirenena, Motel & Restaurant Show. Ireo mpihaino anay mpitarika ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia nanaiky ny hafatr'i Cheryl momba ny 'leadership leadership' sy ny filàna fanavaozana ny rafitra fiasan'ny mpitarika. Ny famelabelaran-kevitr'i Cheryl dia multidimensional sy fisaorana noho ny fifandraisany tamin'ny mpihaino, ny hatsikana ary ny teknolojia. Cheryl dia nanentana ny mpanatrika handefa hafatra sy hi-tweet mandritra ny fotoana - mampisondrotra ny haavon'ny fifamatorana. Ny valin-kafatra voaray avy tamin'ny mpanatrika anay dia tena tsara, ary izy dia nampidirina fatratra tamin'ny fandaharan'asan'ny kaonferansa. ”
K.Moore, talen'ny fivoriambe & hetsika Fikambanan'ny hotely sy hotely amerikanina
"Cheryl Cran dia nanamora ny fivorian'ny Strategie Executive isan-taona tamin'ny volana febroary 2014 ary faly izahay amin'ny valiny. Noho ny fanampian'i Cheryl dia afaka nifantoka indray izahay ary nahazo fanazavana momba ny hafatry ny marika ho an'ny mpanjifantsika, ny zavatra tokony hitranga anatiny mba hanatanterahana ny fampanantenan'ny marika sy ny zavatra ilainay ho mpitarika mpanatanteraka hanovana mba hitarihana ny orinasa ho amin'ny ambaratonga fahombiazana manaraka. . Nandany fotoana niaraka tamiko sy ny ekipa i Cheryl talohan'ny fivoriana paikady tamin'ny andiam-pivorian'ny kaonferansa hanangonana ny fidirana sy ny angon-drakitra hanampiana ny famolavolana ny làlan'ny fivoriana tetika. Namorona fanadihadiana an-tserasera izy mba hanangonana vaovao sy fomba fijery manokana momba ireo fanamby sy ny fotoana mety ho an'ny orinasa ary ny fomba fahitan'ny ekipa mpanatanteraka ny ho avy. Cheryl dia manana fahaizana manokana hanangona angon-drakitra sy atiny goavambe, hanasivana azy ary hanome lalana mazava sy tsotra izay manampy ny mpitarika sy ny orinasa hitombo. Ny endriny dia mivantana fa mahafinaritra ary mahatakatra lalina ny fitomboan'ny tenany manokana ilain'ny olona tsirairay izy mba hahafahany mandray anjara amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny tanjona ankapobeny an'ny orinasa. Cheryl amin'ny maha-manam-pahaizana amin'ny mpitarika azy dia consultative, mamorona ary ny valiny dia miandrandra ny hiarahantsika miasa aminy indray. ”
"Ny fanoloran'i Cheryl Cran ho an'ny vondrona misy antsika Mpanatanteraka, mpitarika Lehibe ary ny hafa dia amin'ny teny KELY! Nanana ny kaonferansa mpitarika fanao isan-taona izahay ary i Cheryl no mpanatontosa famaranana ho an'ny hetsika roa andro. Ny fahaizany mitafy votoatiny izay mifanaraka amin'ny toe-draharaha orinasa ary koa ankehitriny amin'ny fomba mahafinaritra, mahira-tsaina ary fisainana mampitolagaga. Nahazo valiny feno fientanentanana izahay nandritra ny fivoriana nataon'i Cheryl niaraka tamin'ny fanehoan-kevitra fa ny hafatra nentiny dia tonga lafatra akaikin'ny hetsika roa andro ary nahatsapa ho nahazo aingam-panahy izy ireo ary vonona ny hamindra ny fomban'izy ireo amin'ny asany noho ny fihainoana azy. "Nitondra fikarohana, fahaizana mifandray, fahalalàna manerantany ary betsaka kokoa i Cheryl hanampy amin'ny fanaovana ny fihaonambe ho lasa fahombiazana mahavariana."
"Cheryl Cran fanalahidy momba ny Lead Change miaraka amin'ny fahitana 2020 Vita dia marina ny vola! Ny mpikambana ao amin'ny EO Arizona Chapter dia mpandraharaha manana orinasa mahomby ary noravahan'izy ireo ny atiny sy ny zava-misy eo amin'ny fanolorana an'i Cheryl. Manana ny fahafaha-manavanana azy manokana izy noho ny fahasamihafana misy ao amin'ilay vondrona - nanana indostria telo am-polony tao amin'ny mpijery izahay - ary izy dia afaka manolotra fikarohana mikapa izay manaporofo ny filàn'ny mpandraharaha hitarika fanovana hampivoatra ny orin'asa mampiasa mahomby fahaiza-mifampiresaka amin'ny tontolon'ny asa marobe. "Ny vahaolana fiovan'ny fanovana dia misy ny teknolojia fampielezana, fampiasam-pahefana amin'ny haino aman-jery sosialy, famerenany ny rafi-piasan'ny mpitarika ary maro hafa. Ny valiny avy amin'ireo vondrona mpandraharaha izay nanatrika dia ny niheveran'izy ireo fa i Cheryl's Keynote no nanome azy ireo be indrindra an-trano noho ny zavatra natrehan'izy ireo tamin'ny hetsika fianarana teo aloha. "Hiaraha-miasa amin'ny Cheryl indray izahay!"
Fikambanana mpanatanteraka, teti-draharahan'ny fisotroan-dronono Arizona
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika farany tamin'ny fihaonambe GAM ho an'ny auditors anatiny - mety tsara tokoa izany! Ny famelabelarany momba ny Leading Change dia nitazona hatrany ny fanamby sy ny fahafahan'ny mpitondra any amin'ny indostrianay. Ny fanadihadian'i Cheryl teo alohan'ny hetsika dia nanangona ny faharanitan-tsain'ny mpijery izay nanampy azy hanaingo tanteraka ny fampisehoana nataony. Ho fanampin'izay, nandeha tany ambony sy tany ambony izy tamin'ny fikarohana ireo famelabelarana teo alohany mba hampiditra singa mifandraika amin'ny fampisehoana nataony. Izy dia nahafinaritra, mivantana ary nanome paikady fitarihana fihantsiana sy mahasarika ho an'ny vondrona misy anay. Faly izy fa nanome "action item" tamin'ny farany ho an'ny olona haka hevitra sy hampihatra amin'ny toerana fanazaran-dry zareo. Tena mamporisika an'i Cheryl aho amin'ny hetsika na fihaonambe ataonao. ”
Director, Conference Ivontoerana mpamoaka ny atitany
"Cheryl Cran no mpitondra tenintsika nandritra ny andro faha-2 an'ny Konferansa UniverCITZy ho an'ny Minisiteran'ny Teknolojia, Fanavaozana ary Serivisy ho an'ny olom-pirenena BC ary nanao atrikasa fanaraha-maso ihany koa izy ary nitodika tamin'ny ekipa Mpanatanteraka teo am-pisakafoanana maraina. Ny keynote an'i Cheryl mitondra ny fahitana tamin'ny 2020 sy ny atrik'asa natrehiny dia Ilay Mpitarika Fivoarana Miavaka! Tena nanana ny mpihaino anay mivantana sy mivantana ny mpijery lavitra maniry bebe kokoa. Ny fomba fanaterana tokana an'i Cheryl dia misy ny fampifandraisana haingana sy akaiky amin'ny vondrona, manome hevitra feno fahitana sy fisainana, hevitra azo ampiharina ary vahaolana arahinay. Ny mozikany dia nampandihizana anay teo amin'ny sezanay, nampifandray anay ny fifaneraserana ary nampivelatra ny fomba fisainanay ny atiny. Tena hiara-hiasa amin'i Cheryl indray izahay! ”
S. Biblow, mpanolotsaina zokiolona, ​​fahombiazan'ny olona sy ny fandaminana Ministeran'ny teknolojia, fanavaozana ary serivisy olom-pirenena